Iyi VirtualBox 5.1.6 | Linux Vakapindwa muropa
Maawa mashoma apfuura, kuwanikwa kweshanduro nyowani yeVirtualBox kwaziviswa, chaizvo vhezheni 5.1.6, yekugadzirisa yekugadzirisa chirongwa ichi kugadzira chaiwo michina.
Kunyangwe chiri chiitiko chekugadzirisa, ine ruzivo rwakakosha kwazvo. Ichi chitsva ndechekuti VirtualBox 5.1.6 inoenderana neremangwana Kernel 4.8, iyo ine zvishoma zvishoma zvasara kuti ibude (yatove mune yechitanhatu yemushanduri vhezheni).
Pamusoro pekuwedzera iro remangwana tsigiro tsigiro, tsikidzi dzakaonekwa mushanduro yapfuura dzakagadziriswa, chimwe chinhu chinowanzoitika mune iyi mhando yekugadzirisa kugadzirisa. Imwe yeaya mabhugi akagadziriswa yaive bhuru nemapakeji pamwe neiyo rpm yekuwedzera, iyo yanga isina kunyatsobatanidzwa nezvinyorwa zvechirongwa.
Uye zvakare, iyo vboxdrv.sh script yakagadziridzwa, chimwe chinhu chakaitwa kuitira kunatsiridza kuchengeteka mu linux kernel. Kanganiso ine chekuita neyekuwedzera kwevaeni, chirongwa chakaiswa mumachina chaiwo uye icho chinobatsira kuve neruzivo rwevashandisi zvirinani, chakagadziriswawo.
Finalmente zvimwe zvinhu zvekuona zvakagadziridzwa, senge rutsigiro rweNVMe, kururamisa kwembug inopedza yakawandisa disk space uye nekuvandudza mune graphical mushandisi interface.
Pasina kupokana dzimwe shanduko idzo ichaenderera mberi nekuvandudza ruzivo rwekushandisa VirtualBox. Izvo zvakanakisa zvese kuenderana neKernel 4.8, sezvo iri padhuze nekona uye zvirokwazvo vanhu vazhinji vanoiisa iko pavanongobva. Nenzira iyi, vanhu vane kernel yakagadziridzwa kune yazvino vhezheni vanogona zvakare kuve neazvino vhezheni yeVirtualBox.
Kana iwe uchida kudhawunirodha yazvino vhezheni yeVirtualBox pane yako yekushandisa system, iwe une maviri sarudzo. Chekutanga sarudzo ndeye kushandisa yako repository / kurodha maneja kuiwana uye sarudzo yechipiri ndeye kubudikidza nechisungo ichi, umo matinogona kuwana iyo chaiyo vhezheni yeVirtualBox yekugovera kwako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Iyi ndeye VirtualBox 5.1.6
Vim 8, vhezheni itsva yakagadzika yemupepeti uyu yave kuwanikwa